Qorshaha magaalada Diridhaba u kala dagsadeen Oromo iyo Axmaaro!! – Xeernews24
Qorshaha magaalada Diridhaba u kala dagsadeen Oromo iyo Axmaaro!!
2. Februar 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Magaalada Soomaliyeed ee Dire Dhaba waxa wada dagan Qoomiyado badan waxaana Qowmiyadaha dagan ugu badan Tira ahaan.
3 dan qoomiyadod ee u badan magalada qowmiyad kasta waxay wadata qorshahe.
Soomali da oo ah dadka iska leh magalada hadana waa lagaga badan yahay magalada iyo daganaan sheheeda, ganacsigeda, hantida iyo guryaha ka dhisan magalada.
Gaadiidka ka dhex shaqeeya magalada, Police ka iyo shaqaalaha Dowlada iyo ganacsiga ba Soomali du aad bay oogu yaryihiin. Soomali da waxa lagu hayaa riixid iyo sidii magalada looga faro maroojin lahaa, waxa lagu hayaa cadaadis culus, sida weerar joogto ah.
Xaafadaha Soomali da oo dab la sudho (la gubo), Dukaamada iyo meheradaha Soomali da oo la boobo ujeedka ka danbeeya ayaa ah maadama tiro koob kii soo dhow yahay, inaysan Soomali du tiro koob ka galin Dire Dhaba saas darted waxa la qorsheeyey in Soomali da dagan dire dhaba loo qaybiyo 3 qaybood
1. Qayb ka cararta magalada maraky u adkaysan waayan dhibaatada lagu hayo oo u cararta Jigjiga, Shiniile, iyo magalooyin ka kale ee u dha dhow.
2. Qayb xabsiga la dhigo laguna hayo inta tira koob ku dhamaanayo saas na kaga hadha tira koob ka fooda inagu soo haya.
3. Qayb yar oo gacantaa ku gabad ah oo iska joogta cabsi iyo arga gaxna iska nool oon wax saamayn ah keensan karin tiro wakhtiga tira koob ku dhacayana tiro aad uyar (very minority) ah noqota saas na Soomali da magalada Dire Dhaba looga faro bixiyo.
Dhanka kale Jigjiga rabshadaha ay Qowmiyadaha kale ka wadaan, waa inaysan Soomali du ku hawoonin soona hadal qaadin loolan ka iyo sheegashada Magaalada Dire Dhaba waayo Jigjiga baaba muran ka jiraaye xagee dire dhaba loo soo hadal qaadi karaaba, ujeedada rabshadaha Jigjiga halkaas bay daaran yihiin lkn Soomali badan keedu madax iyo shacab ka midna ma fahan sana.
Madax duna waxay ba dheheen rabshadaha Jigjiga ay Qowmiyadaha kale ee martida ah ka wadaan waxa ka danbeeya Soomali kale oo magacyo loo bixiyey sida HEEGO. ( waaba Nasiib daro ka weyn Dhul boobkii iyo riixitaan kii Qowmiyadaha kale.)
Deeganka Amxaaro du Dire dhaba xuduud lama laha hadaba maxaa keenay inay ka mid noqdaan qowmiyadaha oogu tirada badan ee ku nool gacantana ku haya gacansiga iyo dhaqaalaha Magaalada??
Xabashidu nidaam dheer oo si is daba joog ah looga soo shaqeeyey ayey dire dhaba ku dagan yihiin. Laga soo bilaabo Xayla salaase ilaa hada waxa jira gudi joogto ah oo u taagan sidii Dire Dhaba gacanta Amxaaro ugali lahayd waxa na jira hab cilmiyeysan oo dadka Amxaaro da ah loogu beero magalada Dire Dhaba kaas oo ay gudidu u xil saaran tahay.
Sannad kasta Waxa gonder iyo Bahar-dar Laga keenaa 500 oo dhalin yar ah waxana la keenaa magalada dire dhaba mudo bil ah waxa la dajiyaa Kiniisada, gudidii shaqan loo xil saaray ayaa bilaaba sidii shaqo loogu heli lahaa dadkan ay iyagu keeneen mudada bisha ah ee ay Kiniisadu hayso intaysan dhamaanin.
Qof kasta oo dadkaas ka mid ah waxa loo raadiyaa shaqo ku haboon tusaale hadii uu Baalash le noqon karo waxa loo gadaa agabkii Baalash ka, haduu wax bartay waxa laga shaqaleeya Dowlada, hay’adaha, shirkadaha, warshadaha IWM, haduu darawal noqon karo waxa loo dhiibaa gaadhi, haduu bajaaj le noqon karo waxa loo dhiibaa Bajaaj iyo wixii la mid ah.
3. OROMO DA
Oromo iyada oo dhul raadis ahayd hadana Oromo du dhan kasta way ka dagan tahay magalada Dire dhaba, qorshaha ay ka maagan tahay Dire Dhaba si kooban hadii aan u sheegno, Harar iyo dire dhaba 1 qorshe oo ay kula wareegto ayey Oromo du u dhigtay kaas oo ah inay sida biyaha bada u qarqiyaan si fudud na gacanta oogu gasho ayey rabaan.
By Drs Amaal (Bintu Muhammad
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/01/burbur.jpg 960 540 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-02-02 09:11:102019-02-02 09:11:10Qorshaha magaalada Diridhaba u kala dagsadeen Oromo iyo Axmaaro!!
Isbadelka siyaasadeed ee Ethiopia kadhacay waa mid jahadiisii saxda ahayd laga... Maxaa Ka jira in La sumeeyay madaxwaynihii maamulka Oromada?